Published May 20, 2020 at 8:38 PM CDT
Manni LaunchPad muuziyeemii ijole oduu har’a eega dhagahe booda gabaasa baase jira. Akka jedheti “facility bakka mijaawa taphaa kennuuf kutanon ka’aniiru. Guyyaa banamus qophii guddaan eegu jirra. Garuu uf eeeganoofi eguumsaa gahaa hanga arganuti banuudhaf nutti itti hin jarjarruu.
Hojiiwan mana baruusa fi baruumsi June 1 kan banamudha, akkasumas kan akka baseball fi softball seera conference kan governor Kim kamsa himuheedu jalaa demuu qabu.
Ammas guyyaa ayyaana yaaddanoofi dalagaawan state campground mana ficani, mana dhiqatta fi cabins kan banamudha. Suuqota fi kaampidhan maraafu kan hayyamamudha. Garuu bakki taphaa, shelter fi bakka daaw’ini immaa cufamaa.
Kun akkanati osoo jiruu, state kessati sababa covid-19 namni haarawa 14 du’ee gabaasan, waliigalati Iowa keesati namni du’e 381 gahee jira. Magaala Woodbury county kessati namni 2 dabalatan du’eera fi Dakota County keessati namni 1 dabalatan du’uu himan. Waliigala magaala laman kana keessati kan du’e nama 29 gahee jira. Magaala kannin keessatti namni bayeen qabama jira, county lamaan keessati namni qabame 3,900 yoo ta’u, Akka state Iowa tti nama 15, 900 oltu qabame.
Yoo persanti western Iowa nama qabame laalu. Crawford county nama 400 ol kan qabame yoo ta’u yookin percenti 2.4% akka biyyati kan qabamedha. Woodbury County 2.3% oli dha. Test Iowa magaala Sioux City keessati kan qophayedha fi Crawford county community Denison keesatilee. Governor Kim akka jetteti bakkewaan lamaan fi tokko kan storm Lake keessati argamu nama 300 olif qorannoo Wiyxata godhee ture.
Local News LocalIowaSioux CityWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsCrawford CountyCOVID-19Oromo
Manni fayyaa Iowa akka gabeesetti Eastern Iowa keessati daa’imni lama dhukuba coronavirus wal fakkatu qabamu himan. Kunis multisystem inflammatory…
Manni fayyaa Siouxland dabalatan guyyaa har’a namni lama sababa Covid-19 magaala Woodbury country kessatti du’uu gabaase. Namni haarawa qabames nama 50…